संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोरमकै लागि भनेर सहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली राखेका छन्। फोरमले पनि राष्ट्रपति निर्वाचन देखि सभामुख निर्वाचनसम्म वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई समर्थन गरिसकेको छ। तर संघीय फोरम अझै सकारमा सहभागी भएको छैन। संघीय फोरमकै नेताहरु पार्टीभित्र आकांक्षी व्यवस्थापनको समस्याले सरकारमा सहभागीताको विषय टुङ्गो नलागेको बताउँछन्। संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सेतोपाटीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
तपाईंहरु अझै सरकारमा किन सहभागी नभएको?
कुरा चलिराखेको छ। फाइनल भएको छैन। कुरा टुङ्गिसकेको छैन। कुरा नटुङ्गिई जाने कुरा पनि भएन।
टुङ्गिन बाँकी विषय के के हुन्?
संविधान संशोधन लगायतका विषय एकमुस्ट टुङ्ग्याउने कुरा भएको थियो। त्यो टुङ्गिन सकेको छैन।
एमाले नेताहरुले संघीय फोरमले नाम दिन ढिला गरेकाले रोकिएको हो,विषय त मिलिसक्यो भन्छन् नि?
छैन, मिलेको भए त हस्ताक्षर भैसक्थ्यो नि। राजनीतिक सम्झौतामा हस्ताक्षर खै भएको त?
मन्त्रालय विषय त टुङ्गोमा पुगि सक्यो नि हैन?
त्यो पनि अझै टुङ्गिसकेको छैन। बाँकी नै छ। दुई मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री भन्ने संख्या उहाँहरुको प्रस्ताव हो। तर कुन कुन मन्त्रालय भन्ने टुङ्गो अझै लागिसक्या छैन। राजनीतिक सम्झौता हो त्यसमाथ हस्ताक्षर नभएको भनेपछि विषय टुङ्गो भयो भन्न मिलेन नि। सोझै मन्त्रीको नाम पठाइदेउ भनेर त पठाउने स्थिति छैन। उहाँहरु अर्कै पार्टी हो। हामी अर्कै पार्टी हो।
संविधान संशोधनको विषयमा अड्किएको हो त?
अड्किएको भन्दा पनि समझदारी जुन बनेको थियो। त्यसमा हस्ताक्षर भएको छैन।
राजपाले तपाईंहरुलाई सरकारमा जान रोक्न खोजेको भन्ने चर्चा पनि बाहिर सुनिन्छ .. त्यस्तै हो?
खै उहाँहरुको कुरा दोहोरो छ। उता पनि कुरा गरिराख्नु हुन्छ। यता पनि कुरा गरिराख्नु हुन्छ। हामीले भनेका छौँ – राजपा लिँदा हामीलाई आपत्ती छैन। हामीले सहयोग गर्छौँ भनेका छौँ।
तपाईंलाई पार्टी भित्र आकांक्षी व्यवस्थापनमा समस्या छ भन्ने छ नि। राजेन्द्र श्रेष्ठ र रेणु यादवलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ?
छैन छैन। त्यस्तो छैन। त्यो सबै फेसबुकको कुरा हो। फेसबुकबाट प्रचार गराइएको र गरिएको कुरा हो। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। राजनीतिक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बित्तिकै नाम दिने छौँ।
भोली र पर्सीमा सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ?
उहाँहरुले चाहने बित्तिकै हुन्छ। हेरौँ प्रधानमन्त्रीजीले के चाहानुहुन्छ।